Xog xasaasi ah: Wax ka ogaaw taariikhda Taliyaha cusub ee loo magacaabayo NISA – Hornafrik Media Network
Teliyaha NISA ayaa lasheegey in uu doonayo in uu kamid noqdo Mudanayaasha Baarlamaaka 11aad ee Federalka Soomaaliya si uu ugu tartamo Guddoomiye Kuxigeenka Golaha Shacabka.
Teliyaha NISA Fahad yaasiin Xaaji Daahir ayaa
lasheegey in uu doonayo in uu u dhiibo Teliyaha NISA nin lasheegey in uu yahay Gacantiisa midig kaas oo lagu magacaabo Cabdullahi Dheere.
sargaalkan ayaa lasheegey in uu heesto heerka 1aad ee jaamacada, waxaana Jira koorsooyin kala duwan oo uu kasameeyey takhasus laxiriira arimaha Sirdoonka.
Sarkaalkan ayaa kamid ahaa saraakiil dhalinyaro ah oo loo tababarey Dabagalka Amiirada kooxda Alshabaab, waxaana loo magacaabey Maktabka lasocdka Dhaqdhaqaaqa Umarada Alshabaab intii u dhaxeysey 2012 ilaa 2014 waxaana Jagadaas umagacaabey Hogaamihii Alshabaab Axmed Godone oo Abti u ah Sargaalkan.
intuu xafiiska Joogey ayaa lasheegey in fuliyey dilal kala duwan kuwaaas oo uu labeegsadey Amiiro katirsana Alshabaab iyo shacab soomaaliyeed aan waxba galabsan.
horaantii 2015 ayaa lasheegey Cabdullahi Dheere in uu kasoo baxsadey Alshabaab kabid markii lagu tuhumey in uu diley 14 Amiir oo qaarkood si weyn loo doon doonayey wuxuuna ubaxsadey dalka Qadar isagoo durba dhalasho ka heley dalkaasi.
markii loo magacaabey sarkaalkan Teliyaha Hogaanka Dabagalka ayaa lasheegey in uu durbo xiriiro lasmeeyey Kooxda Alshabaab uu katirsanaa saaxiibo muhiim ahna kulahaa isagoona wadahadalo hoose la galey.
xogtu waxey intaa ku dareysaa in siyaasiyiinta mucaaradka ah sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Shariif Xasan qrishaha labaatld kuniraan.
Horjoogahan ayaa loo badinayaa in uu qabto jagada ugu sareysa Sirdoonka Soomaaliya.